thinzar's blog: A hasty tour guide &arushed tour (2)
မျှော်စင်ညီနောင်ကို သွားလည်ဖို့ ချိန်နေတာ ကြာပြီ။ အခုထိတော့ မရောက်သေးဘူး။ အဲဒီကို ရောက်အောင် သွားတော့ သွားအုံးမယ်ဗျာ။
rushed tour ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အမရယ်... :D
6/4/09 8:47 AM
tourist guide တော့မသိဘူး မဇနိတော့ မြန်မြန်ဖတ်လိုက်ရတာ မောသွားတယ်။
ကိုJuly >> KL ရောက်ရင်တော့ အဲဒီကို အရင်ဆုံး ရောက်အောင် သွားသင့်ပါတယ်။
Phyo Maw>> ဒီလောက် မြန်မြန် ဆန်ဆန် ဒီတစ်ခါဘဲ လည်ဖူးသေးတာ။ ရှိသမျှအချိန် မိနစ်စက္ကန့်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ၃ရက်လောက် နေဖူးသွားတာပေါ့။
မဇနိ>> ဖြည်းဖြည်းဖတ်အစ်မ..နားနားပြီးဖတ် :) အဲဒီသုံးရက်ပြီးတော့ နောက်တစ်နေ့ ပင်ပန်းလို့ အိပ်လိုက်တာ ညနေမှထတယ်။
9/4/09 5:00 PM
thinzar>> if I m not mistaken sky bridge is located in level 41 and 42.But 41 is for visitor and level 42 is for staff..but in ur text u mentioned level 44...I m confused... :D
11/4/09 11:17 AM
Harun>> heehee..maybe.. the guide explained but I couldn't remember exactly. So, I just write the nearest figure that I could remember ;) thanks4the correction..
12/4/09 2:36 PM
I'm thinking to visit to KL
but don't know which package to choose.
I'm thinking to choose Berjaya Times Square package.
In ur post, that place doesn't have anything to visit??
KhinL2K>> Hi, the berjaya times square package is quite popular. Bcoz the hotel is really nice. and the shopping mall is quite big. There'sablog (a burmese blogger from singapore) which write about the Berjaya times square package. I'll try to search again and let u know :)
2/5/09 8:19 AM
KhinL2K>> hi, I found the post, it's written by မပန်းခရမ်းပြာ
- Kuala Lumpur-Genting trip (1)- Kuala Lumpur-Genting trip(2)I hope it helps :) hvanice trip!
2/5/09 11:32 AM
2/5/09 11:34 AM